November 2016 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Nov 30, 2016 0
Dhuuxa Wareysiyada Waa Barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa Caawa Lagu soo qaatay qodobo Muhiim Ah. Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa-Wareysiyada-30-11-2016
Aqristayaasha iyo dhageystayaasha ku xiran Alfurqaan waxaannu idiin soo gudbinaynaa warka duhur ee kala deg linkiga Hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka duhur-30-11-2016-
Maxaa u sabab ah shaqa joojinta gaadiidleyda Muqdisho?(Maqal)
Wadayaasha gaadiidka ee Magaalada Muqdisho ka howl gala ayaa shalay shaqo joojin ku dhaqaaqay iyagoo dhigay isu soo bax ay arintaa kaga soo horjeedaan. Waxay diidan yihiin in ay iska diiwaan geliyaan shirkad lagu sheegay in ay caymis…
Dhageyso Abuu Muscab oo Ka Hadlay Ciidamo Dhankooda isku soo Dhiibay.
Afhayeenka Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cabdal casiis Abuu Muscab oo bixiyay wareysi ayaa ka hadlay arimo badan oo ay ku jiraan weerar habeen hore ciidamo ajaaniib ah kusoo qaadeen Magaalada Tooratoorow iyo ciidamo kasoo goostay…
Warka Subax waxaa ku baxay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga Hoose. Halkan Kala Deg Warka -subax-30-11-2016-
guuleed	 Nov 29, 2016 0
Dhuuxa Wareysiyada Waa Barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa Caawa Lagu soo qaatay qodobo Muhiim Ah. Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa-wareysiyada-29-11-2016 FG-Wararka deg dega…
Warka Duhur waxaa Lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg Linkiga Hoose. Halkaan Ka Dhageyso War-duhur-29-11-2016
Axmad	 Nov 29, 2016 0
Madaxweynaha cusub ee loo doortay talada dalka Maraykanka ninka lagu magacaabo Donald Trump ayaa kulan la yeeshay taliyihii hore ee sirdoonka Maraykanka David Batriyos. Kulanka oo ahaa mid qaatay hal saac oo kaamil ah ayaa labada nin…
Ciidamo Ajaaniib ah oo weeraray Magaalada Tooratoorow ee Shabeelaha Hoose.
guuleed	 Nov 29, 2016 1
Ciidamo si dhab ah aanan loo ogayn dalka ay udhasheen ayaa xalay soo weeraray magaalada Tooratoorow oo kamid ah Magaalooyinka Shabeelaha Hoose ee Gacanta ugu jira Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Diyaarado kuwa qumaatiga ukaca ah ayay…
Warka Subax waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga Hoose. Halkan Kala Deg Warka Subax-29-11-2016